Dad aad u yar ayaa Master ka noqon kara fayras sidan ah! | Martech Zone
Dad Aad U Yar Ayaa Macallin u Noqon kara Fayras sidan ah!
Jimco, Diisambar 5, 2008 Axad, Nofeembar, 25, 2012 Douglas Karr
Hambalyo u dir JCPenney ololahan fayraska cajiibka ah. Guriga Doghouse websaydhku wuxuu leeyahay astaamo intaa ka sii badan oo fiidiyowga lagu xallinayo. Fiiri codka ku saabsan Ka Bax Bogga Eeyga Eeyga.
Xusuusin: Hal horumar yar oo aan sameyn lahaa waxay noqon laheyd inaan lahaado qayb wadaag ah sidaa darteed dadku uma baahna inay raadiyaan shabakada!
Tags: guriga eygaaqalka eygaqalin jcFiidiyowyada Suuqgeyntaviralolole fayrasfiidiyaha viral
Kala hadal Waaxdaada IT-ga Firefox
Maxay u tahay hoos u dhac dhaqaale?
5, 2008 at 10: 22 AM
8, 2008 at 6: 12 PM
Way fiicantahay sida khadka tooska ah ee internetka uu u sii daayo sheekooyinka - mar dambe kuma eka xaddidan waqtiyo go'an oo dhowr ilbiriqsi ah.
Jan 13, 2010 saacadu markay ahayd 12:40 PM
wow, tani waa wax weyn! Mid ka mid ah dhowr jeer oo aan arkay oo loogu talagalay in lagu faafo, oo la sameeyo!